Radio Dhangadhi 90.5 MHz | विश्वका नेतालाई भेट्नासाथ किन अँगालो मार्छन् नरेन्द्र मोदी?
विश्वका नेतालाई भेट्नासाथ किन अँगालो मार्छन् नरेन्द्र मोदी?
काठमाडौं : विश्वका नेताहरू भेट्दा हार्दिकता प्रदर्शन गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आफ्नै शैली छ। जतिसुकै शक्तिशाली मुलुकका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री किन नहोउन्, मोदी दुई हात फैलाउँछन् र उनीहरूलाई अँगालोमा कस्छन् र काँधमा धाप मारिहाल्छन्।
उनको यही शैलीका कारण भारतमा कुटनीतिक शिष्टाचार पालना नगरेको भन्दै उनको आलोचना पनि हुने गर्छ। हालै विपक्षी भारतीय कांग्रेसले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको भारत भ्रमण अघि मोदीको 'अँगालो शैली' माथि व्यंग्य गर्दै समाजिक सञ्जालमा त्यसबारे प्रचार गरेपछि भने यो विषय फेरि सतहमा आएको छ। उसले ट्विटरमा भिडियो नै पोस्ट गरेको थियो।
तर मोदीलाई आलोचनासँग के मतलब ! डोनाल्ड ट्रम्प हुन् वा भ्लादिमिर पुटिन वा बेन्जामिन नेतन्याहु, उनी भेट्यो कि अँगालो मारिहाल्छन्। अँगालो मार्नु मोदीको 'ट्रेडमार्क' नै बनेको छ जसलाई विश्वका मिडियाहरूले 'अँगालो कुटनीति' भनेर पनि लेख्ने गरेका छन्। मिडियाहरूले अंग्रेजीको 'हग' (अँगालो मार्नु) र 'डिप्लोमेसी' (कुटनीति) लाई मिलाएर मोदी शैलीलाई जनाउन 'हगप्लोमेसी' भन्ने नयाँ शब्द नै जुराएका छन्।
आखिर मोदी विश्वका नेताहरूलाई भेटेपछि अँगालो किन मार्छन्? जबकि यसलाई कुटनीतिक शिष्टाचारमा त्यति मर्यादित मानिँदैन?
हालै भारतीय टेलिभिजन जीन्युजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा मोदीले त्यसको कारण खुलाएका छन्। र, आफ्नो शैलीको प्रतिरक्षा गरेका छन्।
'म प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै आलोचनाहरू आए कि मोदीलाई गुजरातभन्दा बाहिरको के ज्ञान छ? के बुझ्छ? झन् विदेशनीति त के थाहा होला', उनले आफ्नाबारे उठेका प्रश्नहरू सम्झिए, 'सबैले यही सोध्थे कि विदेशनीति कसरी सम्हाल्छौ? एक प्रकारले यी आलोचनाहरू सही थिए किनभने मसँग कुनै अनुभव थिएन।'
मोदीको बुझाईमा अनुभव नहुनु नै उनको लागि खुसीको विषय भयो किनभने उनी अनुभवको भारीले थिचिनु परेन। 'अप्ठ्यारोलाई सफलतामा परिणत गर्ने मेरो चाहना थियो', मोदीले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, 'कहिलेकाहीँ अभाव पनि शक्तिमा बदलिन्छ।'
आफूलाई 'समान्य मानिस' भन्दै मोदीले हार्दिकता प्रदर्शन गर्ने आफ्नो शैलीबाट मुलुकलाई कुनै क्षति नभएको तर्क गरे। 'म पनि अरु जसरी ट्रेन्ड हुन्थेँ वा ठूलो व्यवस्थाबाट निस्किएको हुन्थ्यँ भने म पनि दायाँ हेर्ने कि वायाँ हेर्ने कि वा हात मिलाउने कि त्यता ध्यान दिन्थेँ होला', मोदीको भनाई छ, 'म सामान्य पृष्ठभूमिबाट आएको हुँ, यसरी नै चलिरहेको छ। म कोसिस गर्छु कि देशलाई मेरा कारण कुनै घाटा नहोस्।'
अँगालो मार्ने आफ्नो शैलीको काम आउने मोदीको बुझाई छ। 'प्रधानमन्त्री भएपछि म दुनियाँलाई भन्थेँ कि म सामान्य मानिस हुँ । म यो सारा प्रोटोकल जान्दिनँ। समान्य मानिस जसरी नै बाँच्छु', मोदीको भनाई छ, 'यो समान्य मानिसको खुलापन थियो र मलाई लाग्छ यसखालको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध खुब काम आउँछ।'
अँगालो मार्ने मोदी शैली त छँदैछ। साँच्ची उनी विश्वका शक्तिशाली नेताहरूसँग उभिँदा के सोच्छन् होला?
जीन्युजका पत्रकार सुधीर चौधरीले अन्तर्वार्तामा सोधेका छन्- 'तपाईँको आडैमा पुटिन र ट्रम्प खडा भएका हुन्छन्। त्यो बेला तपाईँ के सोच्नुहुन्छ?'
'म जतिसुकै शक्तिशाली देशका प्रमुखसँग उभिए पनि मेरो दिमागमा एउटै कुरा हुन्छ- उभिएको मान्छे मोदी होइन, सबा सय करोड देशबासीको प्रतिनिधि हो', मोदीको जवाफ छ, 'हरपल म यही सोचिरहन्छु।'
आइतबार ०७, माघ २०७४ ०१:०७ मा प्रकाशित ।